OWAYEKADE ESIQINISEKISO SAMANDLA ESIBAMBA UKATI NGOKUBIWA - ULWAPHULO-MTHETHO
Owayekade esiQinisekiso saMandla esiBamba uKati ngokuBiwa
U-Yasutomo Ihara wayekhe wangumntu obambeleyo kwizona zinto zibalulekileyo zikwi-TV yaseJapan: Beza abakhweli kwaye Super Sentai , eyokugqibela yaphinda yavuselelwa yangena Abantu abafuna Amandla kubaphulaphuli baseMelika. Konke oko kwaphela, nangona kunjalo, xa walimala edolweni kwaye wanyanzelwa ukuba athathe umhlala phantsi kubomi bakhe be-acrobatics. Yintoni umlingisi wangaphambili owaphukileyo nofuna ukwenza? Kutheni, (etyholwa) ujika kubomi bolwaphulo-mthetho, ewe.
Kutshanje u-Ihara, oneminyaka emihlanu edlulileyo wadlala iindima ezininzi ze-villain kwi UTensou Sentai Goseiger kwaye Kamen Rider OOO, wabanjwa wagwetywa ngokweba ngaphezulu kwe-8 yezigidi ze-yen (okanye i-77,000 yeedola) zexabiso ezixabisekileyo ezivela kwiindawo ezahlukeneyo zabucala ezingama-43 eJapan. Abasemagunyeni baxelele Iindaba zeSankei ukuba u-MO kaIhara wayebandakanyeka ekungeneni kula makhaya ngokukhwela ezindongeni okanye ngokukhazimlisa iipali zefowuni ezikufuphi ukuze aqhekeze kumgangatho wesibini, ngaloo ndlela emfumana igama lesidlaliso elithi Spider-Man. Kubi kakhulu ukuba lo mfo wayengenaye uMalume uBen ukuba amxelele konke okuza ngamandla amakhulu. Ngaba ungasindisa wonke umntu yonke ingxaki.
Kukholelwa ukuba u-Ihara wayecwangcise ukusebenzisa iinzuzo zakhe ezifumanekayo ukuze abhalise kwisikolo sokubambela esiqeqeshekileyo ukuze abuyele kwikhondo lakhe kwezamashishini. Ewe ngoku esenza iintloko, ethengisa ngamalungelo ebali lobomi bakhe kwifilimu okanye kwistudiyo sikamabonwakude mhlawumbi angamfumana indlela imali engaphezulu. Yiza, ubukele isihogo kule nto, akunjalo? Indoda eyadla umhlala-phantsi evela kumdlalo owaziwayo owaziwayo owangena ezindlwini ukuze abe nakho ukwenza iiklasi zokubambela? Njani ukuba lo mfo engenguye umguvela onobungozi emva Batman: Uthotho lweeVidiyo ?
(nge Nguyen )
Ngaphambili kwiGO GO POWER RANGERS
Ewe, i Abantu abafuna Amandla Ukuqalisa kwakhona kuyenzeka ngokwenene: URoberto Orci uqhotyoshelwe
Ngabo abaphindezeli, ukuba babengabaQinisekisi bamandla
Umgcini oLuhlaza ukuze atshabalalise iRekhodi yeHlabathi yokuQhekeza iiBhodi zePine ngelixa iSkydiving
Isithunzi Esiphakathi Komhlaba Se-Mordor
kumnandi ukuhlekisa ngetreyila
U-greg gutfeld sisidenge
I-bane emnyama knight iphakama imaski
I-jurassic world zara icinyiwe indawo
spiderman kwi-ofisi yebhokisi yesigcawu